စာဖတ်ချိန်: 12 မိနစ်များ
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအပေါ်ဘလော့ဂ်ရေးသားခဲ့သည် ရထားပေါ်တွင်လေးတွေနှင့်အတူစီးနင်း သငျတို့သဧည့်ခံသည်သင်၏သူငယ်များကိုစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အခြို့သောအကြံပေးချက်များကိုပေး၏. Reading စာအုပ်များ, Uno ကစားခြင်း, အော်ဒီယိုစာအုပ်တွေကိုနားထောင်တာဟာလူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာကိုမထွက်ခွာမီမှာ download ဆွဲရန် apps များစွာရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကသင့်ကိုဖျော်ဖြေရုံတင်မကဘူးသင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် ပိုပြီးစနစ်တကျနဲ့ပျော်စရာ! App Store မှာကနေ Google Play ကိုမှ, ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးအချို့တက်ဝိုင်းင့် 23 သင်ကနယ်လှည့်မဖြစ်မီ Download လုပ်ဖို့လိုအပ် Apps ကပ. သင်လိုအပ်အားလုံးသည်သင်၏နောက်ခရီးစဉ်မတိုင်မီစမတ်ဖုန်းများနှင့်တစ်ချိန်ချိန်ဖြစ်ပါသည်.
သင်သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်မနေမွို့၌ဥပဒေရေးရာင်ရှိမရှိ, Airbnb အိမ်ထောင်စုနာမတော်သည်. ဒါဟာကျိန်းသေသငျသညျနယ်လှည့်မတိုင်မီဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ် Apps ကပတစျဦးဖွစျသညျ. ဝေးဒီ app ကမ်းလှမ်းမှု စျေးနှုန်းချိုသာစျေးနှုန်းများ, ဒေသခံတစ်ဦးနှင့်အတူနေထိုင်ခွင့်ပြုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောစစ်မှန်အတွေ့အကြုံကို, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏နေအိမ်များတွင်. ဒီ app ကိုလည်းကမ်းလှမ်း အင်္ဂါရပ်ကိုခေါ်ခရီးများထွက်ခြင်း, သင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းကနေရှေးခယျြဖို့အတွေ့အကြုံများကမ်းလှမ်းရာ. ကျနော်တို့ကတဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက်သင်လိုအပ်သမျှကိုကမ်းလှမ်းတိုင်အောင်ရှည်လျားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသေချာ, ယခုမူကားများအတွက်, သူတို့ကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်မှုများသည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်.
ကျနော်တို့နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုဒီမှာအနည်းငယ် apps များပြီးသားရရှိပါသည်နေစဉ်, ယပ်လှေအားလုံးသင့်ရဲ့ခရီးသွားလိုအပ်ချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအကြားစျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်အထောက်အကူပြုတစ်ခု All-In-One App ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ဟိုတယ်များပါဝင်သည်, လေယာဉ်ခရီးစဉ်, ကားအငှားလုပ်ငန်း, ပင်ခရီးသွား packages များ. သင်တစ်နေရာတည်း၌သင်လိုအပ်လိမ့်မည်ခရီးသွားဘွတ်ကင်ရန်၎င်း၏ကြီးမားသောနှိုင်းယှဉ်၏အားသာချက်ကိုယူပါ.
သငျသညျဥရောပတစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏လမ်းအောင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် ရထားနဲ့. ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဥရောပ၌ရွေးချယ်မှုများဟာသူတို့ရဲ့ Cross-တိုင်းပြည်လင့်များကြောင့်ထင်ရှားသည်, နှင့်လေယာဉ်ပျံသန်းမှုအစာရှောင်နေစဉ်, ရထားကပိုအဆင်ပြေများမှာ, ပိုပြီးမကြာခဏ, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအများအပြားပိုပြီးလမ်းကြောင်းများ. သငျသညျရထားလက်မှတ်တွေ၏လိုအပ်ချက်အတွက်နေသောဖြစ်ရပ်အတွက်, ဒေါင်းလုပ်အတွက် တစ်ဦးကရထား Save ဝယ်ယူမှုစျေးပေါပြီးလွယ်ကူစေရန် app ကို.
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခရီးထွက်? ကြီးမားသော! သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာသင့်ရဲ့ခရီးသွားရန်ပုံငွေများခွဲမရကြပါလျှင်အမှုအရာအဆင်မပြေရဖို့များအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ပconflictိပက္ခကိုရှောင်ရှားပြီးသူငယ်ချင်းများကြားကုန်ကျစရိတ်များကိုအလွယ်တကူခွဲဝေရန်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုသုံးပါ. သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်ဆိုလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့ခရီးသွားလာမတိုင်မီဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Splittr ခရီးသွားလာနေသောလူများအတွက်အထူးဖြစ်ပါသည်. သွားလာရင်းကုန်ကျစရိတ် Enter, အဘယ်အရာကိုများနှင့် app ကိုကြွင်းသောအရာကိုပြုလိမ့်မည်ပေးဆောင်တဲ့သူအပါအဝင်.
ဒီ app ကို iOS ပေါ်မှာသာရရှိနိုင်ပေမယ့်, GlobeTips နိုင်ငံတကာက Tipping အကြောင်းကိုရောထွေးသူတို့အားကူညီမယ့်အံ့သြစရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဤသည်အထူးသဖြင့်မှခရီးသွားများအတွက်အထူးသဖြင့်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် Tipping-based စီးပွားရေး အဘယ်သူသည်ပြည်ပမှာနေစဉ်ရုန်းကန်. သငျသညျပြင်သစ်သို့မဟုတ်စပိန်အတွက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, အားလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှငွေဘယ်လောက်လေ့လာသင်ယူရန် GlobeTips ၏အားသာချက်ကိုယူပါ.
သင်တစ်ဦးနှောက်အာရုံကြောခရီးသွားနေပါလျှင်, သင်ခရီးမထွက်မီသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အက်ပ်များထဲမှတစ်ခုသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်, ၎င်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်မည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤသည်နေရာလေးကိုခရီးသွား tool ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဘို့ကွဲပြားခြားနားသောတရားအားထုတ်ခြင်း၏ဝန်ရှိပါတယ်, Self-soothing, အသက်ရှူခြင်း, နှင့်ပိုပြီး. ၎င်းသည်သင်အနားယူကူညီရန်အသံ soothing ကမ်းလှမ်းမှု. ကိုယ့်ကိုကိုယ်တစ် ဦး စိတ်ဖိစီးမှုထွက်ခရီးသွားအဖြစ်, အေးဆေးတည်ငြိမ်ကြှနျုပျစောငျ့ရှောကျကူညီပေးသည်, ကောင်းစွာ, လမ်းမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပါ.
တစ်ဂျာနယ်ထဲမှာရေးသားခြင်းဟောင်းကျောင်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်. ဒါပေမယ့်စက္ကူနည်းလမ်းများအပေါ်ဘာမှသင်ကဆုံးရှုံးများ၏အန္တရာယ်ကို run, သငျသညျမျိုးစုံနိုင်ငံများတွင်လာရောက်လည်ပတ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ခရီးမသွားခင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှာ livetrekker.com ဖြစ်သည်. ဂျာနယ်သည်သင်၏ခရီးသွားမှတ်တမ်းသင်တစ်ဦးအပြန်အလှန်မြေပုံပေါ်တွင်သင်၏ခရီးစဉ်အပေါ်ပြန်ကြည့်နိုင်အောင်. သငျသညျကိုသှားအဖြစ်ဒီ app ကိုသင်ခြေရာခံ, သငျသညျယူအတိအကျလမ်းကြောင်းအပေါ်မြေပုံနှင့်အတူအနီရောင်လိုင်း marking; app ကိုလည်းသင့်ရဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်အမြင့်စောင့်ကြည့်, စွန့်စားမှုခရီးသွားများအတွက်ကကြီးမြတ်အောင်. ပုံရိပ်တွေ Add, ဗီဒီယိုက, အသံ, နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်စာပို့, သင်ဝေမျှနိုင်ပါတယ်တဲ့မာလ်တီမီဒီယာခရီးသွားဒိုင်ယာရီကို! အခမဲ့, iOS နဲ့ Android, livetrekker.com
ခရီးသွားလာနေစဉ်ကျွန်တော်အမြဲရထားအစားကားတစ်စီးကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါ့မယ်သော်လည်း, သင်ကိုယ်တိုင်ညအချိန်တွင်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမရှိဘဲတစ်နေရာရာကိုဦးတည်တှေ့လြှငျသငျသညျ Uber သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. မရနိုင်ငံတိုင်းကတော့ Uber သို့မဟုတ်ယင်း၏အမေရိကန်ပြိုင်ဘက် Lyft ရှိပါတယ်နေစဉ်, နီးပါးတိုင်းတိုင်းပြည်အချို့ကြင်နာတဲ့တက္ကစီ app ကိုရှိပါတယ်. သငျသညျကာဇက်စတန်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်တွင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်၏ဒေသခံတက္ကစီအက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာ။ ရထားပေါ်မတက်မီ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ.
သငျသညျပေါ်ကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ကအကောင်းဆုံး baguette ရှာနေလမ်းများလှည့်လည်တွေ့ရှိရင့်ပြီးတာနဲ့, သင်တို့ပတ်လည်ရရန် Google Maps လိုပါလိမ့်မယ်. အဘယ်ကြောင့်? Google Maps ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအညွှန်း apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင့်,. လမ်းလျှောက်လမ်းညွန် မှစ. မီးရထားအချိန်ဇယားမှ, Google ကသငျသညျဖုံးအုပျထားပါတယ်. ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, သငျသညျအသုံးပြုမှုအတွက်မြေပုံဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အော့ဖ်လိုင်း, ဆိုလိုတာက Wi-Fi အစက်အပြောက်များသောဒေသများရှိလျှို့ဝှက်ကျောက်စိမ်းတုံးကိုလမ်းကြားတစ်ခုပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်.
TripIt သည်စုစည်းမှုကိုအထောက်အကူပြုသောခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည် အားလုံးသင့်ရဲ့ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက် တစ်နေရာထဲမှာ. လေယာဉ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ကနေဟိုတယ်ကိုကြိုတင်မှာယူမှုများမှ, TripIt လွယ်ကူသော-to-ကိုဖတ်ရှုခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်ကြောင်းသို့အရာအားလုံးစုစည်း. app ကိုတိုက်ရိုက်သင့်အကောင့်လင့်ထားသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်၏အတည်ပြုအီးမေးလ်များအားလုံးကိုပေးပို့ပါ, နှင့် TripIt ကြွင်းသောအရာကိုပြုလိမ့်မည်. Desktop ပေါ်မှာရရှိနိုင်, Android, ဒါမှမဟုတ် Apple iPhone, သငျသညျကမ်ဘာပျေါမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျပြီးသားသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဒီ app ရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, နားလည်ပါတယ်. မြောက်အမေရိကအကြီးအကျယ်ဒေတာ-based မိုဘိုင်း app လွဲချော်ထားပါတယ်နေစဉ်, WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ဘို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသည်, ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ, နှင့်အသံခေါ်ဆိုမှုများ. ၎င်း၏လူကြိုက်များအများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရေခြားမြေခြားအပြင်သို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးစံဖုန်းနံပါတ်များ၏အစားတစ်ဦး WhatsApp ကိုနံပါတ်တစ်ခုနှင့်အတူလည်ပတ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်. WhatsApp ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လိုအပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fapps-download-traveling%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
အက်ပလီကေးရှင်းများ longtrainjourneys ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား traveltips